Maalinta: Abriil 4, 2019
4. Shaxanka Caalamiga ah ee Iron & Steel ayaa bilaabmay
3 Nisan Marka loo eego waxqabadka Karabük iyo Karabük Iron iyo Iron steel (KARDEMİR), waxaan soo ururinay saynisyahano iyo wakiilo warshadeed oo caado ka noqday jaamacada Karabük ee jaamacada Karabük. [More ...]
Hadafka farxada ee Kardemir Foundation
Kardemir waa mid hoosaad ka ah 82. oo u dabaaldegaya sannad-guuradeeda, waxay labanlaabantay farxad iyadoo leh rikoorro la duubay oo laga soosaaray wax soo saarka. Marka la joogo Kardemir steelworks, maalin walba 87 casting wuxuu soo saaray wax soo saarka ugu sarreeya weligiis. Maareeyaha guud ee shirkadda Kardemir Hüseyin Soykan oo ku sugnaa dukaan birta [More ...]
Madaarka Atatürk oo ku dhawaaqay hawlihii ugu dambeeyay ee Turhan Yapacak
M. Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa ku dhawaaqi doona diyaaradda ugu dambeysay ee ka tagi doonta Atatürk Airport inta lagu gudajiro u wareejinta garoonka diyaaradaha ee Istanbul. Madaxweynaheena Recep Tayyip Erdoğan wuxuu furay 29 bishii Oktoobar [More ...]
Garoonka Caalamiga ah ee Garoonka diyaaradaha ee Istanbul
Duulimaadyadii caalamiga ahaa ee garoonka diyaaradaha Istanbul ayaa istaagay ilaa iyo 7dii Abriil Ka dib furitaankii garoonka diyaaradaha ee Istanbul sanadkii hore, Turkish Airlines ayaa markii ugu horreysay bilaabay inay ka hawlgasho meelo kala duwan oo gudaha ah ka dibna u aado meelaha caalamiga ah. [More ...]
UTİKAD, Ururka Soosaarayaasha Adeegga Gaadiidka iyo Saadka ee Adeegga Caalamiga ah, ayaa u qaaday waaxda lojistikada ee Turkiga mar labaad shirweynihii caalamiga ahaa. Shirka caalamiga ah ee loo yaqaan 'FIATA World Congress', waxaa lagu soo abaabulay 2014 oo ka dhacday magaalada Istanbul iyadoo la adeegsanayo mowduuca ugu weyn "Koritaanka Joogtada ah ee Saadka" [More ...]
Wareegga Cusub ee Cusub ee Trabzon
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sii waddaa bixinta adeegyo neefsanaya oo u keenaya raaxada gaadiidka magaalada oo dhan. Jid-gooyo by Kocaeli Metropolitan Dowlada hoose qaybta Akçaray Tram Line oo lagu fidin doono gobolka Kuruçeşme [More ...]
Kardamir's 82. Sanadguuradii ayaa la dabaaldegay
3 Abriil Aasaaska warshaddii ugu horreysay ee isku-dhafan birta iyo birta ayaa la dhigay Abril 1937. Maanta, Kardemir iyo 82 wada jir ah Karab withk. u dabaaldegaa sanad-guurada. Dabbaaldegyada Karabük ayaa sii socon doona toddobaadkan oo dhan maanta [More ...]
Waa kuwan wadooyinka la xiro inta lagu guda jiro madaarka Istanbul
Inta lagu gudajiro gegada diyaaradaha ee Istanbul, waddooyinka qaar ayaa loo xiri doonaa taraafikada. Wasiir Turhan wuxuu sharaxaad ka bixiyay mawduuca wuxuuna ku dhawaaqay siyaabaha loogu xiri karo muwaadiniinta. 5 wuxuu ka bilaabmayaa 03.00 habeenka jimcaha ee Abriil wuxuuna ku bilaabmayaa 6. [More ...]
Ha ka welwelin gaadiidka garoonka diyaaradaha ee Istanbul
MOOV by Garenta, taas oo fududaynaysa nolosha dadka isticmaala iyada oo fahamka baabuurta aad u badan oo aad isticmaasho, waxay ka qaadatay meeshiisa Garoonka diyaaradaha ee Istanbul. Kuwa doonaya in ay gaaraan garoonka diyaaradaha ee Istanbul, si fudud ayaa u gaari karaan MOOV Garenta iyaga oo kiraysanaya baabuur ilaa inta ay doonayaan. [More ...]
RayHaber 04.04.2019 Warbixinta Shirka
Keenista sariiraha alwaax ee dherer kala duwan leh
Garoonka diyaaradaha ee Gayrettepe Airport waxaa lagu dhammeeyaa 2020!
Turkey ee Istanbul Airport gaadiidka garoonka diyaaradaha bilowday Rafaa, markii samaynta gaadiid Gayrettepe-Istanbul Airport Wasiirka Turhan dhawaaqay xaaladda cusub ee ku saabsan line Metro. Hawsha cusub ee garoonka diyaaradaha ee Istanbul ayaa bilaabmi doonta caawa. kale [More ...]
Ururka Hagaajinta ee Bursa
Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Bursa (BTSO) Gudoomiyaha İbrahim Burkay iyo Naadiga Bursaspor [More ...]
TCDD, rificationiftehan-Belemedik khadka koronto ee korantada, korantada sare waa laga digayaa. Bayaanka ay soo saartay Agaasinka Guud ee Tareenka Waddooyinka ee Turkiga (TCDD), waxaa la soo gabagabeeyey khadka korantada ee isku xidha Çiftehan iyo Belemedik. [More ...]
Kulankii guddiga Wadajirka Shaqada ee lagu qabtay baaxadda dhaqdhaqaaqyada bulsheed ee Eskişehir Rugta Wershadaha, waxaa warbixin laga siiyay howlaha rugta iyo rajooyinka xubnaha ESO la baaro. Waxaa diyaariyay ESO kulanka, 5 [More ...]